Sunday June 09, 2019 - 19:47:50 in Articles by Hadhwanaag News
Waxan ahay Hooyo haysata toddoba carruura waxay u dhexeeyaan da'da saddex iyo tobbon jirka iyo saddex jirka.
Aabbohood kal saddexaad buu hoyday, halkii loo badnaanna wuu tegay! Godka Eebbe ha u nuuree, wuxuu ahaan jiray Kuuli. Mar wuu heli jiray marna wuu waayi jiray. Keligii kumaan dayn jirin hawsha iyo u soo raadinta bariiska carruurta e’ aniguna waxaan dhinac kale ayaan raadin jiray cuntadooda iyo dharkooda waxbarashadu haba danbaysee. Hadda hawshu keli ayey igu tahay. Waxan muddo laba sanno ah iibin jiray Muuska, markii se’ deyn badan la igu yeeshay baan faraha ka qaaday. Hadda waxaan haystaa meel lagu iibiyo shaaha waa Aqal-Soomaali yar oo baco badan ka samaysan. Gidaar baan ka dhinac samaystay.
Gidaarka kiro badanbaa la iga qaadaa mararka qaar waxay igu gaadhaa afar billood. Waa garanayaa magaalada billicdeeda iyo badhaadheheedaba. Baylahdeedana cidi ii sheegi mayso. Waanan garanayaa wax kasta oo magaalada qurux badnaysiinaya cidina iiga warrami mayso. Dawladda hoose sidaan fillaayo saddexdii billoodba marbay na’ duugtaa oo na’ daad guraysaa, xashiiskana raacisaa dhammaan agabkayaga oo dhan meelna nama geeyaan! Markay maalin ama saddex maalmood naga maqnaadaan waanu soo noqonaa. Annaguna kama daalno askarta naga kala daadinaysa agabkayaga. Qaar naga midaa gura,”Car alaabtayda kala daadi. Ma adaa ku dhaca. Haddaan wiilashaan dhalay kuugu yeedhi waayo fartaad qaadaba ha ku jabiyaane.” Askarta qaar aad bay u naxariis badan yihiin way iska dhaafaan qaarkalana bakoorad bay dabada noo qabtaan. Waa kala duwanaanshaha dadka iyo abuurka dabeecaddoodda.
Gurigayga waxan ka soo baxaa shantaarroornimo, mana ku noqdo inta ay kagaadhayso siddeedda habbeenimo. Carruurtayda cidi ila ma hayso iyagaa is-haya. Waan ogohay tani inay adagtahay hase yeeshee waxan kaga dhigaa calool adayg waa iyo Alle wehelkii. cid aan ahayn Eebbe kagama tago.
Danta carruurtaydaa gurigayga iga soo saartay, danta carruurtaydaan baa bacadka u fadhiyaa, balaayooyinka qaarna la kulmaa, danta carruurtaydaan u daallanahay markasta. Haddaanan sidaa samaynin qayrkaybay u baahanayaan gacantana hoos dhiganayaan! Anna tan ma ogoli mana ogolaan doono, mana ogoli inay waxbarasho beelaan. Waxan ogolahay inay gaadhaan meel ka sarraysa halkay gaadheen qayrkood dadkooda, dalkooda, diintoodana wax ku soo kordhiyaan. Carruurtaydaan u rafaadsannahay markasta. Dartood waan u daalaa, mana danneeyo diifta dushayda ka muuqata. Haa iyaga waxa kasta oo wannaag badan baan u sameeyaa kelidayna ma ahee Hooyooyinkoo dhan baa ila qaba. Hooyooyinka qaar waxay bariiska carruurtooda ka raadiyaan Muus ay iibiyaan in ku xumaata oo laga iibsan waayana yeelata, marka danbana u dhigta xoolaha.